Maitiro & kutsvaga kwezvinyorwa pane iyo nyaya:invest
Wakawana $ 2000? heano maviri akarohwa kukura masheya ekutenga izvozvi
Musika hauna kunge wakanakira kukura masheya nguva pfupi yadarika. Akawanda masheya ekukura akaona maitiro avo achidonha pakati pe10% uye 40%. Zvakadaro, kana iwe uine yakareba-nguva nguva yakatarisa, uyu unogona kuve wekutenga mukana. Kubatsira vatengesi kuti vakunde kusagadzikana kwemusika, yeuka
Nei iyo tilray, org chati yekubata uye iyo hexo stock yakasvetuka nhasi
Izvo Zvakaitika Kumusoro-kukura masheya adzoka mukufarira vemari kusvika pari zvino svondo rino, uye masitadhi e cannabis ari kuwana zvinoenderana nhasi. Vagadziri veCanada Tilray (NASDAQ: TLRY), OrganiGram Holdings (NASDAQ: OGI) uye HEXO (NYSE: HEXO) vari kudzoreredza kuderera kwese kunoonekwa mumw
Sezvo misika inodonha, vatengesi vanotsigira coinbase
Iko musika wemasheya wakaramba wakachinjika, neChipiri uchiunza pekutanga kuwana uchiteverwa nekukweva. Pakupera kwezuva, kunetsekana nezve inflation uye zvimwe zvingangokanganisa misika zvaiita kunge zvinopfuura tarisiro nezvehupfumi hwakasimba. Nekuda kweizvozvo, iyo Dow Jones Industrial Avhareji
Une $ 3,000 here? heano matatu masheya ekutenga nekubata kwenguva refu
Zvinogona kunge zvisingaite kunge $ 3,000 imari yakawanda yekudyara, asi zvinopfuura zvaunogona kufunga. Iwo mashiripiti emubatanidzwa wemubatanidzwa anogona nyore kushandura iyo diki diki kuita makumi ezviuru pamusoro pemakumi emakore anoverengeka anotevera, yakakwana kubhadhara chikoro kana kubhad
Target neWalmart nhanho inotevera yeamazon
Target (NYSE: TGT) uye Walmart (NYSE: WMT) vaona yavo yekutengesa yedhijitari chiteshi ichiwedzera zvakanyanya kubvira kutanga kwechirwere checoronavirus. Nekukura kwakasimba mukutengesa kwepamhepo, ivo vaviri vatengesi vakuru vanoona mukana wekubvisa peji kubva kubookbook yeAmazon (NASDAQ: AMZN) uy